Connecticut WIC Hagaha Cuntada Ingiriisiga | JPMA, Inc.
Wuxuu dhaqan galay Janaayo 2019
Tilmaamaha Suuqa ee Guusha
Caano, Caano Caano, Caano ari, jiis, ukunta, tofu, yogurt
Casiirka dhalada, Cabbitaanka Qudaarta, Juice qaboojiyaha, Isku darka miraha
Miraha iyo Khudaarta gasacadaysan, cagaaran, iyo gasacadaysan
Digir Kulul, Digir Qabow
Rootida iyo rootida oo dhan
Rooti, ​​Tortillas, Bariis bunni ah, Baastada galleyda oo dhan
Subagga lawska, Digirta la qalajiyey, Digir iyo Lentils, Digirta qasacadaysan iyo digir, Kalluunka qasacadaysan
Talooyin ku saabsan Iibsashada eWIC
Dib u eeg liiskaaga dheefaha Qoyska ama rasiidka si aad u hubiso dheelitirkaaga jira ee jira.
Ogow qadarkaaga faa'idada lacagta miraha & khudradda.
Hubi taariikhaha muddada waxtarka.
U fiirso calaamadaha shelfuticilka la ansaxiyay ee Connecticut WIC si lagaaga caawiyo inaad ogaato waxyaabaha.
Ka xulo keliya tilmaamaha Cuntada WIC ka hubi kaliya inaad hubiso inaad haysato tirada saxda ah ee Liiskaaga Waxtarka ama rasiidka.
Weydiiso oo dib u eegto rasiidka macaamilka bartamaha kahor intaadan dooran Haa.
Adeegso kaadhkaaga kaydka ee kaydka ah.
U sheeg khasnajiga inaad haysato kuubbooni kahor sarreynta.
Caanaha, ukunta iyo tofu
Ma iibsan kartaa:
Iibsiga tirada iyo nooca ku qoran liiska Liiska Faa'iidooyinka Qoyska ee WIC
Caanaha dheecaanka ah: Free Free Fat, 1% Lowfat, 2% Fat dhimay, caano dhan (Caruurta 12-23 bilood jirta)
Buttermilk, dabiici, caano dhadhan ama caano cayriin
64 oz / nus gallon, oo la qaboojiyey
Cabbitaanka Naas-nuujinta ee loo yaqaan 'Ultra Ultra Soy Cabbitaanka Aan Caanaha ahayn' (shelf deggan) 32 oz
Caano La Dheereeyay
12 rodol ayaa leh - Xayr Free, 2% ama caano dhan (Vitamin D lagu daray)
Meyenberg (Dareere ama qasacadaysan)
Xulashada Milkiga ah ee Dheeraad ah
Caano la yareeyay / Lactose caano bilaash ah: 64 kartoon / badh kartoon kartoon warqad ah: Skim, 1%, 2%, Dhamaan
Caano Kosher: Skim, 2%, Dhamaan
Shelf Stable, Biyo La'aan
1%, 2%, Dhamaan
Eeg dhakhtarkaaga nafaqada si aad u soo saarto
Xirmooyinka 8 ama 16 ounce
Nooc kasta: Mareykan, Colby / Colby Jack, Cheddar, Monterey Jack, Mozzarella, Muenster
Fatza Free Fat, oo la diyaariyey: Calabro, Polly-O
Deli, xaleef si gaar ah loo duubay, fargeeto jajaban ama jiis, cunno farmaajo, shey farmaajo ama faafis ah, jiis kareem ama jiis, jilay, dhadhan, jiis dabiici ah
Large, 1 darsin, kartoon
Caddaan ama bunni
Ukunta dabiiciga ah
Xirmooyinka 8-16 ounce, Plain
Azumaya: Firm, firm Firm
Ballanqaad Dabeecadeed: Firm, firm Firm
Raashinka Guriga: Firm, Firm dhexdhexaad, Xawaare Dheeri ah
Si aad u hesho macaash buuxa ee tofu iibsiga 8 ama 16 oz oo xirmooyin ah.
Aan dufan lahayn ama dufanka hooseeya
1 rubuc / wiishashka wiishashka ah, 32 xirmooyin ah ama 4 baakado oo ah 8 weel oo wiqiyad ah ayaa la oggol yahay
Dhammaan dhadhaminta waa la oggol yahay
Organic waa la oggol yahay
* Caano Caano oo dhan (Ilmaha 12-23 bilood jir ah)
32 Tuunbada Tuunbada
Brown Cow *
Maple Hill *
Mountain Sare *
Ballanqaadka Dabeecadda *
Toddobo Xiddig Farm *
4-baako (4 xirmooyin) wiqiyad ah (xirmo 16 wiqiyadood)
8-baako (4 xirmooyin) wiqiyad ah (xirmo 32 wiqiyadood)
*Waxa kale oo lagu heli karaa caano caano oo dhan
Yogurt Griig ah, yogurts Lite / Light, majiraan macaan macmal
Hadhaaga Casiirka ee 47.9 oz ama ka yar lama soo celin karo. Xusuusnow in 12 oz karamid ah ururin la egtahay 48 oz oo casiir ah.
Siyaabaha lagu iibsado lacagtaada oo dhan:
Haddii aad haysatid wadar ahaan 96 oz oo casiir ah si aad u hesho lacagta buuxda ee iibsashada 2 qasac oo ah 12 oz isku dar ah
Haddii aad haysatid wadar dhan 128 oz oo casiir ah si aad u hesho xaddiga buuxa waxaad iibsataa dhalooyinka 2 64 oz
Haddii aad wadar ahaan dhan tahay 240 oz oo casiir ah inaad iibsato 2 gasac oo 12 rodol ah iyo 2 64 dhalo cabitaan oo casiir ah. Ama haddii aad doorbideyso dhalooyinka waxaad iibsan kartaa 3 64 dhalo oo oz ah iyo 1 kartoon ah 12 oz ahmiyad siin si aad u gaarto macaashka buuxa.
Iibso oo kaliya:
100% casiir oo keliya
Dhalada 64 oz
Ugu yaraan 120% Vitamin C
Isku darista Casiirka
64 ama 128 wiqiyad
Casiir khudradda ah
Sodium-yar oo Kaliya
Juice / khudrada isku dar ah
Casiirka A Lot
Dhamaan isku darka cabitaanka sharaabka 100%
Dhammaan 100% Isku-darka Juice-ka
Casilan oo Xun
11.5-12 ounce, 100% casiir, ugu yaraan 120% Vitamin C
Casiirka oo dhan Ma Iibsadaan:
Juice is biirsaday, cabitaanno, cabitaanno ama cabitaan lagu daray sonkor ama macaaneeyeyaal.
Miraha Fresh iyo Khudaarta
Nooc kasta oo kala duwan
Dhammaan, precut, xoqan ama baakaysan - oo ay ku iibiyaan bac, sanduuqyo, gabal, rodol ama xirmo
Saladh iyo / ama cagaarka isku dhafan oo ku jira bac
Alaabta ka timaadda baastada saladhka, buunshaha xafladaha, miro la qalajiyey, cunno fudud, khudrad, khudrad, dhir udgoon, geedo saytuun, basbaasyo miro ah, saladh / xirmooyin xidhmo leh oo ay ku jiraan labbiska dharka, hilibka, nuts, kareemada, jiiska, iwm.
Miraha la qaboojiyey
Nooc kasta / noocyo kala duwan iyo baaxad
Miro kasta oo cad, isku dhafan miro cad
Khudaar kasta oo cad, iskujira khudradda cad
Macaannada darayga ah, sonkorta, sharoobada, dufanka, saliidaha, khudradda faransiiska, bunniyo madoow, tots toater ama baradhada qaabeeya.
Waa inaan lagu buuxin maraqa, baastada ama bariiska
Weelasha qasacadaysan ama balaastikada ah ayaa la oggol yahay
Bixinta shaqsiyeed ama weelasha Weelka, cabbir kasta ha lahaadee
Xulo astaan ​​kasta
Dooro maaddooyinka hal ah ama iskudarka miraha
Waa in aan la xoqin oo lagu buuxiyaa casiir ama biyo
Daawooyinka leh macaaneeyaha midabka leh ama kuwa aan lahayn kalooriiga sida Furuqa Miro
Maraq tamaandho qasacadaysan
Maraqa yaanyada qasacadaysan / Suugo la kariyey
Ku dar macaaneeyeyaasha, sonkorta, sharoobada, dufanka lagu daray, saliidaha
Nooc kasta iyo cabir ahaanba
Waxay noqon kartaa mid caadi ah ama ka hooseysa soodhiyam
Macaannada darayga ah, sonkorta, sharoobada, dufanka lagu daray, saliidaha, khudradda la kariyey, khudradda kareemka ah ama la kariyey, digirta la dubay, hilibka doofaarka & digirta, maraqa, xawaashka, xawaashka, saytuun,
Sida loo Isticmaalo Furumahaaga iyo Macaashkaaga Khudradda
Ogow dheelitirkaaga macaashka intaadan dukaamaysan.
Haddii mirahaaga iyo khudradda aad iibsato ay ka badan tahay inta ugu badan ee dollar ah, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku kala bixiso lacagta caddaanka ah, EBT, SNAP, ama nooc kale oo lacag bixin ah oo dukaanku aqbalay.
Haddii mirahaaga iyo khudraddaadu ka yaryihiin lacagta ugu badan ee doolar, dheelitirkaagu wuxuu ku sii jiri doonaa kaarkaaga WIC. Fadlan hubi inaad hubiso risiidhada dukaankaaga taariikhda uu dhacayo waxtarkaaga.
Dalaga Ilmaha (Qalalan)
Cabbirka haanta 8 oz oo keliya
Noocyo ay ka mid yihiin DHA, miro, caanoboolo iyo / ama yogurt.
Miraha Ilmaha iyo Khudaarta
4 ama 8 ounce weelka cabbirka oo keliya
Dooro maaddooyinka hal ah ama iskudarka miraha iyo khudradda (tusaale, tufaaxa mooska, baradhada tufaaxa macaan, iwm.)
Sonkorta lagu daray ama sharooto
Waxaa loo heli karaa dhallaanka naaska nuugiyo 6-11 bilood oo keliya
Cunnooyinka dhallaanka - Hilibka
Weelasha 2.5 oz
Cabbirka weelka oo ah 2.5 ounce oo keliya
Ka xulo noocyada soo socda:
Lo'da & lo'da lo'da / Caato
Digaag & Digaag Digaag / Digaag
Ham & Ham Broth / Gravy
Turkey & Turkey Broth / Gravy
Boorash, macmacaan, casho, hilib casaan ah, isku dar ah oo lagu daray DHA / ARA, cusbo, sokor, jiis, badar ama baastada
12 sanduuq oo oz ama wax weyn ah. Xirmooyin keli ah oo loo adeegto ma jiraan.
Hadhaagga firida 11.9 oz ama ka yar lama soo celin karo.
Dhammaan dalagyada ku qoran gunta guduudan ayaa hadhuudh ah
Chex Cinxon Chex
Hal-abuurka Fiber One
Maxaabiis yaryar oo barafoobay
Cinabyo Canab ah
Cunnooyin malab ah oo macaan
Oat caqli badan
Dufan Malab & Qulqul
Masaafada Maska ee Crispy
Hadhuudh shiidan (qabow)
Dufan malab leh oo qabow
Digaag Caano Malab
Waxyaabaha isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Honey'
Calool Adag Qaab
Xulashada Beerta wanaagsan
Hadhuudh shiilmay (Barafoobay)
Xulasho wanaagsan Oat Crunch
Kooxo Caano ah oo Malab ah
Oats & More leh malab
Dabiiciga Qamadiga ah & Barley Nuggets
Xaydha iyo wixii dheeri ah
Hadhuudhkii Gogded ee Qabow
Malabka Crunchin 'Oats
Dufan yar oo Caloolayaal ah
Digir Kulul kulul
MOM Asalka Kulul ee kulul ee MOM
Kulul Kulul Oat Bran
Rootida / Isku wada darka
Boqolkiiba 100% Qamadiga Qamadiga / rootida Qamadiga
1 rodol (1lb) ama 16 oz oo kibis ah
Bakhaarka Wadada Alvarado Wadada oo dhan
Arnold Stoneground All Wheat
Bimbo Dhamaan Caag
Jikada wadanka oo dhan
Roodhida Hadhuudhka Geedka oo dhan
Bakhaarka Biladaha Dahabka ah oo dhan
Weelkii Biladaha Dahabka ee Dahabka leh Flaxseed
Holsum All Wheat
Krasdale 100% rootida galleyda
Penn Street All Wheat
Beeraha 'Pepperidge Farm' aad u khafiif ah 100% Galley
Beeraha Doogga Dhammaanba
Sara Lee100% Galley
Stern's All Wheat
Sunbeam All Wheat
Miisaan ilaaliyayaasha Dhamaan Cawska
Beeraha Dhirta Dabaysha Dhagax-Menzanos
Beeraha Dabaylku Dhagaxa-Hamotze
Cajiib All Wheat
Cunno Hadhuudhka Ugu Fiican
Big Y All Wheat
Noocyada Suuqa Dhexe ee Galleyda
Qiimaha Ugu Weyn 100% Galley dhan
Cunnooyinka Muhiimka ah ee Dhammaan Cawska
Dalagga Hadhuudhka Geedka oo dhan
Si fudud isugu dheellitiran galley dhan
ShopRite All Wheat
Jooji & Dukaan Galley Dhammaantood
Jooji & Dukaan Dhammaan Cayayaanka leh Flaxseed
Jooji & Dukaan Wax cusbo ah oo milix lagu daray
Urban Meadow Galley dhan
Boorsooyinka, rooti gaduudan, rooti cad, rootiga rootida lagu kaydiyo
1 rodol (lb) ama boorso 16 oz ah
Tortillas jilicsan ama alwaax guban oo dhan
Qamadiga All Chi-Chi
Chi-Chi's Corn Corn
Don Pancho All Wheat
La Banderita All Wheat
Mayan Beeraleyda Dhammaan Galley
Ergada All Wheat
Qulqulka jirka oo dhan
Pepito All Wheat
Toddobo dhan Caato
Naadiga Cuntada Dhammaan Cawska
IGA All Wheat
Natures 'Balanqaad Burka oo dhan
Waxyaabahayga Muhiimka ah ee Dhamaan Galleyda
Dabeecadda Dabiiciga ah ee Hadhuudhka
Jooji & Dukaan Caddaan Saaran
Jooji & Dukaan Gaariga Jaalaha ah
1 rodol (lb) ama 14 - 16 rodol oo bac ah / sanaadiiqda
C & F hadhuudh dhaadheer / gaaban
Uncle Ben ee Degdega ah & Dabiiciga Dhamaanba Midhaha islaanta ah
Cunnida Dabiiciga ah ee Uncle Ben
Cunnooyinka Boil-ku-galka ee Unug Ben
Welina ugu dhakhsaha badan isla markiiba
Cunnid Hadhuudhka Ugu Fiican
Naadi Cuntada Boil-in-Bag
Midho dhaadheer oo IGA ah
Boorsada-Boorsada PICS / Qiimaha Chopper
Jooji & Dukaan Boil-in-Bag
Jooji & Dukaan Islamarkaaba
100% Qamadi / Qamadi Qamadiga oo dhan
1 rodol ama 16 oz oo xirmo ah
Meelaha la oggol yahay
Barliil Dhamaan Calool / Caleen dhan
Delallo Organic All Wheat
Circle Organic buuxa oo ah Galley
Gia Russa Galley dhan
Hodgson Mill All Wheat
Luigi Vitelli All Wheat
Racconto All Wheat
Goosashada Hadhuudhka ee Caafimaadka Ronzoni
ShopRite 100% Galley dhan
Shurfine All Wheat
Subagga looska, Digir, Digir, Lentils, iyo Kalluunka qasacadaysan
16-18 oz dhalooyinka
Si jilicsan oo jilicsan, labeen ama qolof leh
Dhab ahaan waa la oggol yahay
Laxan dhadhan leh ama dabiici ah
Digirta, Digir iyo Lentils
1 rodol (16 ounce) bac ah
Nooc kasta oo khudaar ah oo ah digir la qalajiyey, digir, ama digir
15 - 16 oz awood
Bannaanka ama khudradda
Sonkorta, dufanka, saliida, khudradda, miraha ama hilibka, digirta la dubay
Qeybaha qaarkood ee Haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya:
Waxaa kuxiran biyo ama suugada lagu daro darayga ama dhadhanka waa la oggol yahay
5 oz wuxuu awood u yeelan karaa
Iftiinka Chunk oo kaliya
5 -15 wiish oo gasacado ah
3.75 oz wuxuu awood u yeelan karaa
Caanaha Naasku waa Deegaanka Deegaanka u Wanaagsan
Caanaha naaska waxaa ku duugan oo ay ku keydisaa hooyadeed qashin yar ama aan qashin lahayn!
Kaarkaaga eWIC waxaa kaliya oo laga aqbalaa iibiyaasha la ogol yahay ee Connecticut loomana adeegsan karo gobol kale. Liistada cusboonaysiinta ee iibiyaasha idman ee WIC weydiiso shaqaalaha wakaaladda deegaankaaga, booqo ct.gov/dph/wic hoosta tabelaha alaabada ama tag barnaamijka WICShopper oo guji iibiyaasha WIC.
Hagahan Cuntada waxaa ku jira liiska walxaha WIC oggolaatay. Faa'iidooyinka ayaa gaar u ah baahida ka-qaybgalaha. Sidaa darteed, ma ahan alaab kasta oo ku qoran Tilmaamaha Cuntada inay u qalmaan iibsashadaada.
Tusaale ahaan: In kasta oo hagaha cuntadu leeyahay caano dhan oo ah shey la oggolaaday oo WIC ah, haddii aad leedahay cunug laba sano ama ka weyn waxaad awoodi doontaa inaad kaliya iibsato 1% ama caano aan dufanka lahayn / cunaynin cunuggaas.
Dhamaan cuntooyinka WIC ansixiyay kama muuqan karaan buugyarahan. Si loo hubiyo in sheygu yahay mid WIC oggolaaday isticmaal ikhtiyaarka Scan Barcode ee barnaamijka WICShopper. Si aad u ogaatid cuntooyinka WIC ansixisay ee bakhaarka ku yaal, ka raadi calaamadda shelfut WIC ee la ansixiyay. Dukaammada ma xaddidi karaan xulashooyinkaaga noocyada WIC ee la oggolaaday.
Lacag-hayuhu waa inuu iskaariyaa dhammaan waxyaabaha aad dooratay.
Marka la heli karo dib u fiiri risiidhada macaashka bartamaha kahor intaadan xaqiijin haa. Haddii aad ku bixisay shay ay ahayd inuu ka soo baxo kaarka eWIC waxaad weydiisan kartaa lacag celin inaad ku soo celiso miiska adeegga macaamiisha ka hor intaadan bixin.
Si si wanaagsan loogu adeego haddii dhibaato kaa haysato iibsashada ama iibsashada shay, wayddiiso maareeyaha bakhaarka. Hadaad ubaahantahay caawimaad dheeri ah, wac xafiiska WIC ee Gobolka at 1-800-741-2142 inta aad dukaanka joogtid.
Ma badali karaa cuntooyinka ku taxan liiska gargaarada qoyskayga?
KALIYA xafiiska WIC ee deegaankaaga ayaa beddeli kara xirmada cuntadaada. Haddii aad qabtid walaac ama baahiyo gaar ah, iska hubi inaad lahadasho nafaqadaada WIC ka hor inta aan gargaaradaada la soo saarin Waxaa laga yaabaa inay awoodo inay hagaajiso xirmada cuntadaada.
Ma u baahanahay inaan iibsado wax kasta oo ku taxan liiska gargaarada qoyskayga?
Maya, lagaagama baahna inaad soo qaadato wax walba oo ku taxan Liiskaaga Gargaarka Qoyska. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad si xushmad leh u dukaamaysato oo aad iibsato keliya cuntooyinka aad ogtahay inaad adeegsan doontid.
Maxaa dhacaya haddii aan cuntada ka idlaado oo aan isticmaalo dhammaan gargaarkayga WIC?
Barnaamijka WIC waxaa kaliya loogu talagalay in lagu “kabo” cuntadaada. Cunnooyinka aad ka hesho WIC looguma talagalin inay kaafiso baahiyahaaga nafaqada oo dhan. Waxaad u baahan doontaa inaad iibsato cunno dheeri ah kaligaa. Xafiiska deegaankaaga ayaa kaa caawin kara inaad hesho barnaamijyo gargaar cunto dheeri ah haddii loo baahdo.
Ma keydin karaa dheefaha bisha soo socota ee aanan isticmaalin?
Maya. Macaashka ayaa dhaca bartamaha saqda dhexe ee taariikhda uu dhacayo ee laga helo risiit walba.
Miyaan ka qaybqaadan karaa in kabadan hal Barnaamijka WIC isla waqti isku mid ah?
Maxaa dhacaya haddii aan guuro?
Isku day inaad la xiriirto xafiiska WIC ee deegaankaaga ka hor intaadan guurin. Waxay ku siin karaan macluumaadka wareejinta si aad u geyso xafiiska WIC ee aaggaaga cusub.